Ogaden News Agency (ONA) – Q2aad – Axmad Nashaad waa Nin Khatar ah oo Hadaf leh
Q2aad – Axmad Nashaad waa Nin Khatar ah oo Hadaf leh
Posted by ONA Admin	/ April 14, 2013
Qorshan wuxuu ku wajahayn yahay marka ugu horeysaba jaaliyadaha dibadda ee taageera halaganka Gobanimadoon ee ka socda Ogadenya iyo dawladaha caalamka ee la socda qadiyadda Ogadenya. Yoolka ugu dambaya qorshahan waa in la ogolaysiiyo ONLF iyo shacabka taageera rabitaanka Itobiya maadaama siday u dhigayaan hadalka aan lagaga guulaysan karin dagaalka. Fariinta loo soo dhiibay Axmad nashaad cinwaankiisu waa midkaa. Marxalada kala horeeya ayaan loo marayaa oo isugu wada biya shubanaya in niyadda laga dilo shacabka iyo kolba xubinka ONLF ee meel laga helo. taaktikada uu adeegsanayo Axmad nashaad een ka hayno waxay yihiin sidan;
1- Talaabada 1aad waa in sumcadda laga dilo xubnaha ONLF iyadoo loo sawirayo inayna akhlaaq lahayn oo diinta aanay aqoonin/ku dhaqmin, oo aanay waxba dhaamin budhcadda. Haddii midaa ay u gadmi weydo.
2- Wuxuu Axmad nashaad isagoo odhanaya anagaa isla joognay oo idnka naqaana soo taxaya waxyaabo aan qofka caadiga ah xataa ka suurtoobin, iska daa nin qadiyad leh oo shacabkiisa ku dhex jira. Wuxuuna ku soo celcelinayaa war sugan kama haysaan waxa ka socda gudaha oo waxa la’idiin sheego umbaad maqashaan. Haduu qof ururka ah la fadhiyo, sidaydoo kale, wuxuu isku dayayaa inuu ka raarido in xogta dhabta ah laga qarsado oo aan loo sheegin, taasoo ujeedada uu ka leeyahay ay tahay inuu shaki ku abuuro.
3- Qofkii ka ogolaada inuu xogta dhabta ah ee gudaha isaga Axmad nashaad ah uga war roon yahay maadaama uu gudaha joogo horeyna uga soo dagaalamay, qofkaasi meeshii lala doonayay ayuu galay, waxaana ku xigta in laga raarido qodobo lagu soo ururin karo sidan;
• ONLF dagaalanta waa hore ayaa ugu dambaysay.
• Ciidanakii ONLF wuxuu u kala fadhiyaa qabiil, inyar oo qabiil ah ayaana hadda ku soo hadhay oo meelaha socsocda.
• Reer Hebel, iyo Reer hebel, iyo Reer hebel, intuba kuma jiraan dagaalka (waxaana xooga la saarayaa qofka horfadhiyaa waqtigaa reerkiisa) oo nabaday qaateen.
• Markuu dagaal dhoco waxaa ku dhinta waa inaga un oo reer hebel ah. Tigree xabad lagu rido waa hore ayaa u dambaysay.
• Maxaa inaga reebay anaga hadday Somalidii kale ay wada hoos tageen Itobiya.
4- Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado isku dayga ah in qofka (gaar ahaan xubnaha la hubo ah), laga raarido in madaxda ONLF ay kala fikrad yihiin oo aanay lahayn hadaf midaysan. Wuxuuna intaan wada-fadhinay Axmad nashaad ku dadaalayay inuu yidhaahdo waxaan hayaa caddaymo, sida inuu yidhaahdo Gudoomiyihiina ma aaminsana in dalka lagu xoreyn karo qoriga oo aniga Axmad nashaad ah ayuuba igu yidhi ..
5- Wuxuu aad isugu dhabar jabiyaa Axmad nashaad inuu qofka/dadka horfadhiya ka raarido fikrada ah in heshiiska ay galeen ay qasab ku noqotay ka dib markay ONLF gudaha kula dagaalantay, Shabaabkana Somaliya uu ka soo saaray, oy soo foodsaaratay xaalad adag oo ah ciidankii iyo xaasaskoodii oo meel ay geeyaan ay waayeen. Ujeedada qodobka waa in loo garaabo isla markaana eeda is-dhiibkooda dusha laga saaro ONLF. Doodaa si sahlan ayay uga raarideen dadka aan xog-ogaal u ahayn arimaha siday u socdeen iyo falalkii ay ka fulinayeen Axmad nashaad iyo ciidankuu watay, ama ogayn doorka uu ka ciyaareen Ibraahim dheere iyo xulafadiisa gobolka Jubada Hoose iyo dagaaladii uu hogaaminayay Dul-Yadayn.
6- Qodobka ugu muhiimsan ee aad loo buun-buuniyo waa in maamulka Tigreega ee hadda jira wax badan inoo ogolaa/ogolyahay hadaan yeelano sida uu hadalka u dhigo caqli iyo muwaafaqo aan isku ognahay.
7- Waxaa intaa dheedheer in qofka khal-khal lagu rido oo laga dhaadhiciyo inay Itobiya ogtahay sirta ONLF oo aan waxbaba ka qaarsoonayn. Intaan wada fadhinay aniga iyo Axmad nashaad wuxuu ku soo celcelinayay qoraalo ama codad ay duubeen. Markaan idhaahdo aawayna, jawaabtiisu waxay ahayd hadda mawado.
Qodobadaa oo uu la kaashanayo aftahanimo iyadoo mararka qaarkoodna uu adeegsanayo aqoon diineed oo loola kacayo inaysan banaanayn maanta in jihaad lala galo Itobiya, qofkaan xog-ogaal u ahayn halganka socda iyo habka uu ururka u shaqeeyo iyo xidhiidhka ka dhexeeya madaxda ONLF, waxaa laga yaabaa inuu ku guulaysto Axmad nashaad hadafka uu ka lahaa.
Halkan ka dhagayso qaybyar oo ka mid ah doodii na dhexmartay.. Waqtigeeda ayaan soo bandhigi doonaa cajaladdan taariikhiga ah. La soco qaybaha dambe.
The guy needs both religious and political rehabilitation.